Bipute ma tinye Label Machine Manufacturers & Suppliers - China Bipute na Tinye Labeling Machine Factory
Ntughari ederede (mm): mm 2mm (njehie kpatara ngwaahịa na akara adịghị echegbu)
Ntughari ederede (PC / min): 20～30pcs / min (nke oke ngwaahịa na akara ya, na njikwa onye ọrụ)
Ngosiputa Ngwaahịa Ngwaahịa: Dịka ngwaahịa ngwaahịa ndị ahịa si dị
Kwesịrị ekwesị akara ngosi (mm): Dịka ngwaahịa nke ndị ahịa si dị
Odabara ike ọkọnọ: 220V 50 / 60HZ
Ibu ibu (n'arọ): banyere 180kg
Ike (W): 100W
Ngwaọrụ akụkụ (mm) (L × W × H): about1100mm × 700mm × 1450mm
Ntughari ederede (mm): ± 1.5mm
Ntinye ederede (PC / h): 360～900pcs / h
Ngwaahịa dị mma: L * W * H: 40mm ~ 400mm * 40mm ~ 200mm * 0.2mm ~ 150mm
Adabara labeelu size (mm): Obosara: 10-100mm, Ogologo: 10-100mm
Onyinye ike: 220V
Ngwaọrụ akụkụ (mm) (L × W × H): ahaziri
FK-SS Real Time Printing Labeling Machine adabara ozugbo nbipụta na akara na n'akụkụ. Dị ka scanned ozi, na nchekwa data kwekọrọ ekwekọ ọdịnaya na-eziga ya na ngwa nbipute. N'otu oge ahụ, a na-ebipụta akara ahụ mgbe ị natara ntụziaka mmezu nke sistemụ njirimara na-ezigara, na isi akara aha na-amịrị ma na-ebipụta Maka ezigbo akara, ihe mmetụta ihe na-achọpụta ihe mgbaàmà ahụ ma rụọ ọrụ akara ngosi. Nkọwapụta zuru oke na-egosipụta njirimara dị mma nke ngwaahịa ma na-akwalite asọmpi. A na-eji ya na nkwakọ ngwaahịa, nri, ihe eji egwuri egwu, kemịkalụ kwa ụbọchị, eletrọniki, ọgwụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
FK800 igwe akụrụngwa akụrụngwa na ngwaọrụ na-ebuli elu
① FK800 igwe akụrụngwa akụrụngwa na ngwaọrụ na-ebuli elu dị mma maka ụdị nkọwa dị iche iche, igbe, akpa, katọn na akara ngosi ngwaahịa ndị na-adịghị mma na nke dị ala, dị ka nri nwere ike, mkpuchi plastik, igbe, ihe egwuregwu ụmụaka na igbe plastik dị ka akwa.
② FK800 igwe akụrụngwa akụrụngwa na ngwaọrụ na-ebuli elu nwere ike nweta akara ngosi mkpuchi zuru oke, akara ngosi ziri ezi, akara aha ọtụtụ aha na akara akara ọtụtụ, na-ejikarị na katọn, eletrọniki, awara awara, ụlọ ọrụ na ihe oriri.
FK-SC-5001 ahaziri mkpụrụ osisi akpaka na mpempe akwụkwọ nri nri
Enwere ike itinye igwe akụrụngwa dị arọ na ntanetị ma ọ bụ igwe na ngwa ndị ọzọ na-akwado ya, a na-ejikwa ya na nri, eletrọniki, mbipụta, ọgwụ, kemịkalụ kwa ụbọchị na ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Ọ nwere ike ibipụta ma kpọọ ngwaahịa ndị na-asọ na ezigbo oge n'ịntanetị, yana ibipụta akwụkwọ na ịdepụta aha; Bipute ọdịnaya: ederede, ọnụọgụ, leta, eserese, koodu mmanya, kọmpụta abụọ, wdg. Igwe akụrụngwa dị arọ Kwesịrị ekwesị maka mkpụrụ osisi, akwụkwọ nri, anụ ebu igbe ozugbo na-eri nrịba aha. Kwado igwe nyocha ahaziri iche dịka ngwaahịa a.
FK-ZX Online Cache Bipute Labeling Machine adabara ewepụghị elu mbipụta na labeling. Dị ka scanned ozi, na nchekwa data kwekọrọ ekwekọ ọdịnaya na-eziga ya na ngwa nbipute. N'otu oge ahụ, a na-ebipụta akara ahụ mgbe ị natara ntụziaka mmezu nke sistemụ njirimara na-ezigara, na isi akara aha na-amịrị ma na-ebipụta Maka ezigbo akara, ihe mmetụta ihe na-achọpụta ihe mgbaàmà ahụ ma rụọ ọrụ akara ngosi. Nkọwapụta zuru oke na-egosipụta njirimara dị mma nke ngwaahịa ma na-akwalite asọmpi. A na-eji ya na nkwakọ ngwaahịa, nri, ihe eji egwuri egwu, kemịkalụ kwa ụbọchị, eletrọniki, ọgwụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.